Medicine "Dimefosfon", intengo okuyinto ngaphakathi ruble 300, kungokwalabo ulwelwesi eliletha ukuthula, immunomodulating, ama-ejenti eqeda ukuvuvukala. Umuthi Umsebenzi radioprotective futhi antihypoxic. I nomuthi ubukisa umphumela antioxidant, umthamo-dependently kwehlisa umfutho lipid peroxide namachibi. Ngenxa ukusebenza izindlela umzimba isimo evamile acid-eziyisisekelo, kukhona nasekuqiniseni izicubu umzimba nokugeleza kwegazi intraorgan. Izidakamizwa "Dimefosfon" (izimpendulo wezazi siliqinisekise) has ezinye izakhiwo neuropharmacological. Ngakho, ithuluzi ihlinzeka nootropic, antidepressive futhi isenzo antiamnesic kuyahluka antiischemic, mnemotropnym, ithonya stressoprotektivnym. Through the isenzo izidakamizwa "Dimefosfon" (incwadi yeziyalezo kuhlanganisa idatha efana) kuthuthukise ukugeleza palsy, outflow emithambo yegazi, evamile ubuchopho kwegazi futhi ithoni izitsha palsy. imiphumela Neurotropic nomsebenzi Cerebroprotective zibangelwa ithonya neyrometabolisticheskie izindlela zokuzivikela zobuchopho. amandla obujwayelekile kanye carbohydrate umzimba, msebenzi omkhulukazi ebuchosheni izicubu enzyme antioxidant uvinjelwe ukuthuthukiswa lipid peroxidation namachibi. amazinga egazi Maximum waphawula ngemva kwamahora angu-2-3 ngemuva izidakamizwa abaphathi.
"Dimefosfon" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa. ubufakazi
Umuthi kuboniswa ezibangela e-cerebral ukugeleza kwegazi elihlobene ne nomfutho wegazi ophezulu, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, kwezinso umgogodla, vasomotor dystonia. Ngu ubufakazi, ngokukhethekile, zihlanganisa radiculopathy, myelopathy, discirculatory encephalopathy, ezibuhlungu okuqala unhlangothi, oluhambisana nonhlangothi ischemic, lezivakashi ischemic kuhlasela hlobo. Izidakamizwa "Dimefosfon" imfundo manual uncoma at TBI, ukuhlukumezeka kuhlinzwa umgogodla kanye nobuchopho imvelo neurosurgical, ukungasebenzi autonomic, isifo kanye UMeniere Syndrome.
Umuthi kuboniswa ngenxa pathologies oyingozi futhi ezingalapheki yaleli pheshana zokuphefumula ezihilela subcompensated nomfutho wegazi ophezulu yamaphaphu, inyumoniya lactic, bronchospastic samuntu isimiso bronchial (isifo sofuba yamaphaphu, isifuba somoya, ukucinana kwemigudu yokuphefumula okungamahlalakhona). Ngu izinkomba zihlanganisa atopic dermatitis, zokugula e otolaryngology, isifo rahitopodobnyh ezinganeni, izilonda uhlobo trophic, izilonda utheleleke, sibi zokuphefumula izilonda viral flow, entero-oksalurichesky imvelo lezinceku syndrome.
"Dimefosfon" imithi. Yokusetshenziswa
Umuthi iqondiswa ngemithambo yegazi. 1-2 izitsha eziyisikhombisa kokuqukethwe buhlanjululwe in 10-20 ml amanzi (oyinyumba) isixazululo umjovo noma sodium 0.9% chloride. Iconsa isidakamizwa siphela sodium 200-400 ml 0.9% chloride. Umjovo Kwenziwa izikhathi 1-4 ngosuku izinsuku eziyisikhombisa noma eziyishumi. Ngaphakathi imithi Kunconywa 30-50 mg / kg kane ngosuku. Isikhathi yokwelapha ku isizinda atopic somoya ezinganeni, pathologies kule ipheshana zokuphefumula futhi lactic, nge ukungasebenzi autonomic, UMeniere Syndrome neziyaluyalu kwegazi - usuku olulodwa kuya emasontweni, nge TBI - kusukela emasontweni amathathu kuya ezinyangeni ezimbili.
Zenkolo Kuhle kakhulu sifo
Umuthi 'Levomitsetinovaya wamafutha' - Ingabe kukhona Izimo?